होम स्टेको लोकप्रियताले तारे होटेललाई चुनौती – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
होम स्टेको लोकप्रियताले तारे होटेललाई चुनौती
By डिजिटल खबर Last updated Oct 30, 2019 1 0
१३ कात्तिक, काठमाडौं । मुलुक द्वन्द्वग्रस्त अवस्थाबाट भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएका थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विदेशी पर्यटकहरुले भौतिकरुपमा खासै क्षति व्यहोर्न परेन । तर, लगानीकर्ताहरु हतोत्साही भएका कारण आतिथ्य उद्योगमा लगानी आउन सकेको थिएन । ठीक त्यहीबेला नेपाल भ्रमण वर्ष २०११ को एक महत्वपूर्ण उपहार बनेर आयो होम स्टे अर्थात घरबास ।
सशस्त्र द्वन्द्वबा बेला भएकै होटेलहरु बन्द भइरहेका थिए । तत्कालीन भ्रमण वर्ष अभियानका दौरान आतिथ्य सेवालाई पर्यटक आकर्षित गर्ने माध्यमका रुपमा विकास गर्ने अवधारणा अगाडि बढ्यो । फलस्वरुप सरकारले देशमा होम स्टे प्रवर्द्धनको नीति लियो । होम स्टे सञ्चालनको कार्यविधि बन्यो । मापदण्ड तोकियो ।
फलस्वरुप अहिले देशका ५५ भन्दा बढी जिल्लामा होम स्टे सञ्जाल विस्तार भइसकेको होम स्टे एशोसिएशनका अध्यक्ष केशव बडाल बताउँछन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१८ सम्म विभागको दर्ता प्रक्रियामा ३२४ घरका ५९७ कोठामा होम स्टे संचालनमा आइसकेका छन् । यी कोठामा १ हजार ६ बेड पाहुनाका लागि तयार छन् । त्यसपछि भने होम स्टेको दर्ता स्थानीय सरकारको जिम्मामा पुगेको छ ।
पछिल्लो समय होम स्टेतर्फ आकर्षण बढेका कारण होम स्टेको संख्या पनि बढेको अध्यक्ष बडालले उल्लेख गरे । बडालका अनुसार अहिले देशभर ६ सय निजी तथा सामुदायिक होम स्टे खुलेका छन् । कूल १८ सय घरधुरीमा होम स्टे विस्तार भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
नेपालको पहिलो होम स्टे स्याङ्जाको सिरुवारी हो । यहाँ २०५४ सालमै होम स्टे शुरु भएको हो ।
स्वरोजगार र संस्कृति संरक्षणको आन्दोलन
होम स्टे अभियन्ता यसलाई एक आन्दोलनका रुपमा ब्याख्या गर्छन् । गाउँ पर्यटन प्रवर्द्धन मञ्च (भिटोफ) नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष दीपक दाहाल ग्रामिण पर्यटनले युवा स्वरोजगार वृद्धि र संस्कृति संरक्षणमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको बताउँछन् ।
‘पैसा शहरबाट गाउँ जाने लैजाने माध्यम होम स्टे बनेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कपिय स्थानमा विदेशमा मनग्य कमाउने यूवा पनि गाउँ फर्केर होम स्टे प्रवर्द्धनमा लागेको देखिएको छ ।’ भिटोफ आफैले ग्रामिण गन्तब्य पहिचान गरी त्यसलाई बर्सेनि प्रवर्द्धन गर्न सक्रिय संस्था हो । यस संस्थामार्फत हरेक वर्ष तीन वटा नूमना गाउँ छनोट गरी त्यसलाई वर्षभर प्रवर्द्धनको सूचिमा राख्ने गरिन्छ ।
त्यसो त होम स्टेले संस्कृति, संरक्षणमा उत्तिकै ठूलो भूमिका खेलेको छ । ग्रामिण र शहरी इलाकाबाट लोप भइसकेका मौलिक गीत संस्कृति, झाँकी, लत्ता कपडा होम स्टेले संरक्षण गरेको छ । युवापुस्ताले परम्परागत भाषा, संस्कृति, सिकेका छन् । उनीहरु हरेक साँझ पाहुनालाई मौलिक संस्कृति र रमझम देखाउने गर्छन् । त्यसैका माध्यमबाट होम स्टेले एकातर्फ राम्रो आम्दानी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ मौलिकता समेत बाचिरहेको छ । उपाध्यक्ष दाहाल भन्छन्, ‘तपाईले अब मेला पर्वमा समेत नभेट्ने मौलिकता होम स्टेमा भेटाउनु हुन्छ, यो भन्दा ठूलो योगदान के हुन सक्छ ।’
होम स्टेले गाउँमा पर्यटक मात्र लगेको छैन, साथमा विकास र समृद्धि पनि भित्राइहरेको छ । एक सामुदायिक होम स्टे स्थापना गर्न ५ वटा घरधुरी आवश्यक पर्छ । उक्त होम स्टेसम्म पुग्न बाटो आवश्यक पर्छ । बत्ति-विजुली, शौचालय, खानेपानी होम स्टेका अत्यावश्यक पूर्वाधार हुन् ।
जहाँ होम स्टे सञ्चालन गर्ने हो, ती घरले यी पूर्वाधार बनाउनैपर्छ । घरवरपर सरसफाइ राख्नुपर्छ । पाहुनालाई खुवाउने मासुदेखि तरकारी र खाद्यान्नसम्म स्थानीय तहमै उत्पादन हुन्छ । जसले गर्दा कृषि उपजले बजार पाएको छ । पशुपालन पुनः फस्टाउन पाएको छ ।
होम स्टे एशोसिएशनका अनुसार देशभर होम स्टेकै कारण करीव ४ हजार ४ सय रोजगारी सिर्जना भएको अनौपचारिक तथ्यांक छ । एक घरमा होम स्टे चल्दा त्यसले दिने बहुआयामिक रोजगारीको अवसरले ग्रामीण भेगमै आम्दानीका बाटोहरु खुल्न थालेका छन् ।
छुवाछुत विरोधी अभियान
होम स्टेमा छुवाछुत हुँदैन । दलित समुदायले चलाएको होम स्टेमा ब्राहृमण समुदायका रुपमा सहजै जाने गर्छन् । थकाली होम स्टेमा दलित समूदायका मानिस सहजै घरभित्र पसेर भान्सा गर्न सक्छन् । त्यसकारण होम स्टेले नेपाली समाजमा रहेको छुवाछुतको विकृति हटाउन समेत उल्लेख्य भूमिका खेलेको होम स्टे अभियन्ताहरु बताउँछन् ।
जब कमजोर आय भएका मानिसहरुको आम्दानी बढ्छ, त्यसले स्वतः ती समुदायको पनि पुनरुत्थान हुन थाल्छ । अहिले अधिकांश स्थानमा दलित र जनजाति समुदायले चलाएका होम स्टे बढी फस्टाएका छन् । लमजुङको घलेगाउँमा गुरुङ समुदायले होम स्टे चलाएका छन् भने बर्दियाको डल्ला होम स्टे थारु संस्कृतिका लागि चर्चित छ ।
यसकारण शुरु भयो होम स्टे
सरकारले २०६७ सालमा होम स्टे सञ्चालन कार्यविधि ल्याएर होम स्टेको अवधारणा शुरु गरेको छ । यस कार्यविधि अनुसार होम स्टे संचालनको मूख्य उद्देश्य पर्यटन क्षेत्रको प्रतिफल ग्रामीण समुदायसम्म पुर्‍याउनु हो ।
ग्रामीण समुदायको आयस्रोत वृद्धि गरी स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्न यो अभियान प्रारम्भ गरिएको हो । पर्यटकलाई ग्रामिण जनजीवनबारे जानकारी गराउने र संस्कृति, रीतिरिवाज, कला संस्कृति, र रहनसहनको उत्कृष्ट अनुभव हासिल गर्ने मौका प्रदान गर्ने गरी होम स्टे शुरु गरिएको हो । होम स्टेको अवधारणा शहरका लागि पनि ल्याइएको हो । शहरमा पर्यटकलाई सरल र सहज बसोबासको व्यवस्थाका लागि होम स्टे शुरु भएको हो ।
होम स्टेको मापदण्ड
पाँच घर मिलेर सामुहिक रुपमा होम स्टे चलाउन सकिने या एकल रुपमा एक घरमा मात्र पनि मापदण्ड पूरा गरी होम स्टे चलाउन सकिने प्रावधान छ । खासगरी शहरी इलाकामा निजी र ग्रामिण इलाकामा सामुदायिक होम स्टेको अवधारणा ल्याइएको हो ।
होम स्टेले स्थानीय क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सांस्कृतिक कार्यक्रम र क्रियाकलाप, परम्परागत खेलमा सहभागी गराउने, उपलब्ध हुने क्षेत्रमा जंगल ट्रेक, इको ट्रेक तथा दृश्यावलोकनको समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ । पर्यटकलाई मौलिक मेला, जात्राजस्ता गतिविधिमा सहभागी गराउन समेत होम स्टेले भूमिका खेल्न सक्छन् ।
होम स्टे दर्ता भइसकेपछि हरेक होम स्टेले आचारसंहिता निर्माण गर्नुपर्छ । सामुदायिक होम स्टे सञ्चालन गर्न भिन्न-भिन्न स्वामित्वका कम्तिमा ५ घर आवश्यक हुन्छ । होम स्टेमा पाहुना सुत्ने कोठा भने अलग बनाइएको हुनुपर्छ । एक घरमा बढीमा ४ वटा मात्र कोठा होम स्टेका लागि छुट्याउन सकिने गरी मादपण्ड तोकिएको छ ।
सुत्ने कोठामा धुवाँ आउने नहुने, सफा हुनुपर्ने, भुईमा राडी पाखी तथा गुन्द्री भए पनि ओछ्याएको हुनुपर्ने भनी मापदण्ड राखिएको छ । सुविधायुक्त र सफा शौचालय, नुहाउने छुट्टै प्रवन्ध, भन्साघर नजिकै वस्तुभाउको गोठ नभएको र घरमा आवश्यक सबै सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । मुसा, लामखुट्टे, उडुस, उपियाँजस्ता किराबाट पर्यटकले सास्ती भोग्नु नपर्ने गरी प्रवन्ध मिलाउनु पर्छ ।
होम स्टे तारे होटेललाई चुनौति हो ?
होटेल संघ नेपाल (हान) मा आवद्ध ठूला होटेल व्यवसायी शहरी इलाकामा खुलेका होम स्टेले ठूलो लगानीका तारे होटेलको बिजनेश प्रभावित पारेको गुनासो गर्छन् । हानका निवर्तमान अध्यक्ष अमरमान शाक्य शहरभित्रै होम स्टे खुल्दा ठूलो लगानी गरेका होटेल प्रभावित हुने बताउँछन् । तर, होम स्टे सञ्चालकहरुको तर्क भने बेग्लै छ ।
होम स्टे एशोसिएशनका अध्यक्ष बडाल होम स्टे र तारे होटेलमा बस्ने पर्यटकको प्याकेज नै छुट्टाछुट्टै हुने बताउँछन् । ‘होटेल बुक गरी नेपाल आएको पर्यटक होम स्टेमा बस्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘होम स्टेमै बस्ने गरी विदेशबाटै प्याकेज किनेर आएको पर्यटकले ठूला होटेललाई प्रभावित नपार्ने उनले बताए ।
कतिपय होटेल आफैले होटेल र होम स्टे दुवै सञ्चालन गरी सबै विजनेश आफैं लिने गरी शहरमा होम स्टे चलाएको गुनासो समेत सुनिने भन्दै यसतर्फ भने स्थानीय सरकारहरुले मापदण्डमा कडाई गर्नुपर्ने उनले बताए ।
होम स्टेका कारण चम्किएका केही गाउँहरु यी हुन्-
सिरुबारी, सुन्तलाबारी समुदायिक होम स्टे- स्याङ्जा
घलेगाउँ, काउलेपानी – लमजुङ
डल्ला होम स्टे- बर्दिया
भादा गाउँ- कैलाली
BusinessDigital KhabarHome StayHotelNepal
चार्डपर्वपछि कसरी शरीरलाई फिट एन्ड फाइन राख्ने ?
उपनिर्वाचन र विभाग थप्ने प्रस्तावले काँग्रेस तरङ्गित !